Date My Pet » Kuva Amazing First Date
Last updated: Oct. 21 2020 | 5 Maminitsi verenga
A zuva rokutanga kunogona kuoma nguva mapato vose. Uye anoziva kuti kutarisira, kunyange kana wataura kuti munhu paIndaneti kana pafoni uye zvichida vanofunga kuti muchizviziva kwazvo, vanhu vakawanda vanowanzoda kunzwa kakutya pamberi zuva rokutanga. Saka heano mazano kuti zuva guru rokutanga.
Chengeta zuva rokutanga pfupi - Nokuti zuva rokutanga Zvingada zvatoitika zvinenge kuti pfupi uye zvinozipa. Ukadaro unogona kuva nguva huru pamwe chete uye kupedzisa pakakwirira. Hazvinei zvakadini ungadaro kwakabatana kana uri paindaneti, zvingava zvakasiyana zvachose kana ukasangana ari munhu, uye hauzivi kuti muri kukwira kusvikira nguva navo muupenyu chaihwo. Saka vakatakura ichi mupfungwa kuchengeta zuva rokutanga pfupi.
Nokuita izvozvo nenzira iyi kana musingadi wakasununguka navo ipapo unogona kusiya mangwanani. Zvisinei kana iwe DO chaizvo wazvose, zvinokoshawo kuti vachengete zuva pfupi. A chikanganiso guru vanhu kuti kana vari kufambidzana ndiko kupedza nguva yakawandisa pamwe zvakare nokukurumidza. Kunyange zvazvo zviri takasikwa tichida kupedza nguva pamwe chete kana uchifarira mumwe nomumwe, zvichaita kubvumira kubatana vava sezvingatarisirwa kana inokudziridza zvishoma nezvishoma pamusoro nguva. Ukadaro unogona kuwana pakuzivana zvishoma nezvishoma. Uyewo uchava nekukoshesana zvikuru kana uri hauziri anowanika kodzero pakutanga. Healthy vanhu varambe zvavo mazvake uyewo mari nguva kudanana.
Uchifunga nezveizvi usataure chisvusvuro ndishushikane kuti zuva rokutanga. Kana rinozobudawo kuti ipa (uye anogona) uchava kugara kuburikidza kweinenge awa, kazhinji kwenguva, navo, kana kudzidza chaizvo kusiya mangwanani.
Itai chinhu maoko pamusoro uye mafaro - Kunyange zvazvo kunwa doro kubhawa vanowanzochema sarudzo kuti zuva rokutanga hazvisi zvose Funga zvimwe zvokugadzira. Uyewo zvingava zvishoma zvakaoma isununguke paunenge vagere mhiri kubva umwe chakarongwa ezvinhu. Nenzira yakafanana ichitora kofi kunogona kuva kusarudza chakanaka kuti zuva rokutanga nokuti anokurumidza uye nyore, Zvisinei kana uchida zvechokwadi kuti vavafadze wadii kuenda nokuda chinhu kujairika uye maoko pachinzvimbo. Sarudzai chinhu apo muchiita chiitwa pamwechete, zvikuru maoko pamusoro nani sezvo izvi zvinogona kubatsira isununguke. Mienzaniso yakanaka vari kubika pamwe chete, kuti kufamba-famba munzvimbo yakanaka ezvinhu, zvehari kana chinhu apo iwe kushanda sechikwata. Izvi achatora nevezera kubva vaviri newe sezvo uchange muchiita chinhu pamwe chete. Inoita unhu yenyu kuuya kuburikidza zvikuru sezvingatarisirwa, pane musi akatendeuka kuva 'kubvunzurudzwa' mhiri tafura, izvo kazhinji zvinogona kuitika kana wasangana mubhawa.
Chengetedzeka - Izvi zvinofanira kuva chikamu dater wacho Vandana, kunyanya madzimai kuroora. Zvazvinoita pasina vachiti munofanira nguva dzose kuramba yakachengeteka pfungwa uye vasarudze kusangana vari padare nguva yokutanga ukasangana nomunhu. Havabvumirani kuenda nokuda kudya kwamanheru paimba yavo. Hazvinei kuti zvakanaka unonzwa waunoziva kutaura paIndaneti, unogona tambotaura kuudza sei munhu akavimbika ari kusvikira waita vakapedza nguva navo. wo, zvechokwadi nomuimbirwo kupinda mwoyo wako (dumbu maitiro). Zviri ikoko kukudzivirira uye kazhinji mwoyo wako achakuudzai kana chinhu kana mumwe munhu haasi kunzwa zvakanaka. Teerera uye nguva dzose vakachengeteka pakutanga.
Iva nechokwadi chokuti uri nepfungwa dzakanaka usati waenda musi yako - vanhu vakawanda vanoenda zuva ravo pakarepo achibva kubasa, uye apo hapana chakaipa ichi zvakakosha nechokwadi chokuti iwe kuratidza vava nepfungwa dzakanaka nokuti zuva rako. Kana musoro wako ichiri kwako 'kuita' nyora musingadi kuva zvikuru kunakidza musi! Saizvozvowo kana iwe vanoenda akasimbisa, taisazofara uye vachichema musingadi kuita zvakanaka kuororwa. Tora maminitsi mashoma kuzorora uye ungagadzirira usati vasataure pamusoro zuva rako. Tora vamwe rwekufema yakadzika uye kuita kutandara kurovedza kana zvakakodzera. Gadzirira pfungwa dzako - kuona sei uchida musi kuenda. Kunyange kana vanoenda kubasa unokwanisa kuita apo ichi mubhazi.
Vamwe vakadzi vanopedza maawa kugadzirira miviri, asi regai kupedza chero nguva uchigadzirira mupfungwa. Nepo zviri zvakanaka nechokwadi chokuti unzwe chivimbo nezvechitarisiko chako, achipedza maawa pairi zvinogona chaizvoizvo kuwedzera dzvinyiriro. Pane kupedza chete refu zvakakwana kuti iwe kutarisa akazochena uye unzwe zvakanaka, ipapo vanopedza maminitsi mashoma uyewo kugadzirira pfungwa dzako. Zvakanakisa uchatungamira misi dzako kunzwa Dzinotangazve uye nekaupenyu vakadzikama. Zvingava zvakanaka kuti kuridza vamwe mimhanzi inokurudzira paunenge kugadzirira uye kunyange vane kudhanzi kumativi mumba. Akati areva ake regai kukanzura zuva kana imi hamusi zvakakwana pfungwa kana muri huta. Kazhinji kamwe iwe kubuda mumba uye musi uchava kufaranuka uye unakirwe.
Iva zvauri - Dzimwe nguva vanhu kuenda vokutanga misi havasi pachavo. Ivo kuchinja unhu hwavo kuedza kufadza mumwe munhu. Zvichida tsinga dzavo kuti vawane nani kwavari uye vanoguma kuzvibata oddly, achiedza kuoma, clamming kana kunyange kuisa ari mberi kuvhara tsinga. Ndiwo zvachose hakukoshi uye kunogona kukuvadza mikana yako rakasikwa kwakabatana uye kunakidzwa pamwe zuva rako. Ndinoziva zvingava tsinga wracking musangano munhu kokutanga saka regai ndikuudzei zvishoma chakavanzika. MUNHU wose anonzwa huta musi wokutanga! Saka zuva rako vangave vachifunga sezvo kushuvira sewe. Ndezvomuzvarirwo saka regai pachako kure chirauro. Pane kunetseka pamusoro tsinga dzako pfungwa kudzidza chimwe chinhu chitsva pamusoro munhu uyu pamberi penyu uye kufunga kuita kuti vanzwe vakasununguka. nzira iyi uchaona pachako vakazorora zvikuru sezvingatarisirwa. Chokwadi kana wasarudza kuita mavoko basa sezviri pamusoro izvi zvinogona kukubatsira kuzorora. Paunenge kuora ndagadzikana unhu hwako wechokwadi vachapenya kuburikidza. Just kuva pachako. Muri akakwana chaiwo sei muri.
Nakidzwa - Kumadokero mutsika tose sokuti kutora kudanana inokoshesa chaizvo. Kanganwa pamusoro vakazviziva kuti munhu uyu akakodzera upenyu naye panguva ino. A FIRST MUSI haizi KUTSVAKA kana zvakakodzera mukomana / musikana ACHASHANDISWA. Rinobva Papera. Kazhinji havasi – vakawanda misi yokutanga haanamati ukama uye kana uchiziva izvi zvinogona kukubatsira kudzora zvaunotarisira. misi First inongova kuzokutora kunze uko misangano uye kuwadzana nevanhu vatsva, uye vava kufara uye kunakidzwa. Nenzira 'uchinakidzwa' muchiitiko ichi hazvirevi kuwana here akadhakwa kana pabonde, zvose izvo zvinofanira kudziviswa musi wokutanga (kana uchida musi wechipiri ari). Nokuti chete vatengi Ndinoshanda pamwe ndinogara akakurudzira Achibuda imomo uye kudanana munyika chaiyo. Ini zvikuru vanokurudzira here kuverenga nyaya yangu kudanana sezvo pakurapwa kudzidza zvakawanda.